सफलताका लागी त्याग्नु पर्ने बानी व्यवहार ! – HamroKatha
माफी माग्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको गल्ती गरेको महसुस हुना साथ मन देखि नै ‘मलाई माफ गर्नुस्’ भन्नु नै हो । यसो गर्दा तपाईं आफ्नो गल्तीका कारण उत्पन्न हुने समस्याको समाधान छिटो गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्ना ग्राहकहरुको बिश्वास जित्न सक्नु हुन्छ र आफ्नो वरिपरिका सबैसंग अझै मिलेर काम गर्न सक्नु हुन्छ ।
हाम्रो कथा २०७६ जेठ १७ गते १५:१५
तस्वीर : Fortune.com बाट
कतिपय बानीलाई हाम्रो संस्कार, समाज, परिवारिक मान्यता, हुर्काइ-बढाईले निर्धारण गरेको हुन्छ I तर, अघि बढ्नु छ भने, सफल हुनु छ भने आफ्नै बानी व्यवहार पनि आफैले चुनौती दिनु पर्छ I
त्यसो भए, हामीले के-कस्ता बानी त्याग्नु पर्यो त ?
१. आफुले गरेका कार्यहरुको जिम्मेवारी नलिने
जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा, तपाईंले जे गरे पनि त्यसले केही न केही परिणाम दिएकै हुन्छ । परिणाम कहिले राम्रो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पछुताउनुपर्ने खालका परिणामहरु पनि आउँछन् । सँधै राम्रो नै हुन्छ भन्ने छैन । यो विश्वव्यापी सत्य हो । परिणाम जस्तो आउँदा पनि तपाईंले त्यसको जिम्मेवार आफैलाई बनाउनुपर्छ । किनभने कार्य तपाईं गर्नुहुन्छ र जस्तो कार्य गर्यो त्यस्तै परिणाम आउँछ । तसर्थ तपाईंमा यदि परिणाम हेरेर जिम्म्मेवारी लिने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने बानी छ भने त्यो आजैदखि त्याग्नुहोस् । तपाईंमा यो विश्वास हुनुपर्यो कि परिणाम जस्तो आए पनि मैले गरेको कार्य गलत छैन र यसले कहीँ न कहीँ फरक पारिरहेको छ । आफूले रोजेर गरेको कार्यमा मेहनतका साथ लाग्नुपर्यो । त्यसमा इमानदार हुनुपर्यो । जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्यो, बस् । त्यति भएपछि तपाईं कहिल्यै गलत कार्य गर्नुहुन्न । अनि सही कार्यको परिणामप्रति जिम्मेवार हुनबाट डराउने कुरै भएन नि । होइन त ?
२. सबै कुरा जानेको छु जस्तो गर्ने
यदि तपाईंलाई सबै कुराको जानकार आफै हुँ भन्ने लाग्छ भने यस्तो बानीले तपाईंलाई सफलतातिर डोर्याउँदैन, बरु विफलताको बाटोमा धकेल्छ । आफूलाई सफल बनाउनुछ भने सफल भएका अरुहरुको कुरा सुन्नुस् । सँगसँगै बिफलता पाएकाहरुबाट पनि धेरै सिक्नुस् । किनभने अरु धेरै व्यक्तिले असफलता भोगिसकेको बाटो हिँड्नुअघि पाठ सिक्ने मौका तब मात्र हुन्छ, जब तपाईं बिफल मानिसहरुको अनुभवबारे धैर्यपूर्वक सुन्नुहुन्छ । आफ्नो कर्मचारी वा आफ्नो ग्राहकले बोलिरहेका बेला अवरोध नगर्नुहोस् । सबैका कुरा सुन्ने बानीले तपाईंलाई सही र दूरदर्शी निर्णय लिन सघाउँछ ।
अरुका कुरा सुन्दा के चाहिँ तपाईंले ख्याल गर्नु जरुरी छ भने सुनेकामध्ये धेरै कुरा गर्न आवश्यक हुँदैन । जस्तो कि तपाईंले पहिले नै थाहा पाउनुभएका तथ्यहरु, अपरिपक्व सिकाइहरु, अनुपयोगी आलोचनाहरु आदि इत्यादि गन्थनको काम छैन । तर त्यस्ता गन्थन नसुनी पनि सुख हुँदैन । आफै सर्वज्ञ छु भन्ने ठानेर अरुलाई सुन्दै नसुन्ने बानीले नोक्सानी मात्र गर्छ । धेरै सुन्नुस् । तपाईंलाई नजानी नहुने महत्वपूर्ण कुराहरु कत्ति पनि काम नलाग्ने कमसल कुराहरुकै बीचमा आउन सक्छन् । काम लाग्ने जति राख्नुस्, बाँकीलाई बिर्सनुस् ।
३. गुनासो गर्ने
जे कुरामा पनि गुनासो गर्ने तपाईंको बानी छ भने त्यसलाई त्याग्नुस् । अरुको बारेमा धेरै गुनासो गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अमूल्य समय मात्र गुमाउँदैन, नकारात्मक सोचको शिकार पनि हुनुपर्छ । सधैं नकारात्मक सोच राख्ने मानिसलाई कसैले मन पराउँदैन । सबैको नजरमा अप्रिय भएपछि आफ्ना लागि जति प्रिय भए पनि त्यसले सफलता दिँदैन । गुनासो मात्र गरेर बस्नेहरु आफू त विफल हुन्छन् हुन्छन्, आफ्नो कम्पनी र कर्मचारीहरुको भविष्यलाई पनि विफलताको बाटोमा धकेल्छन् । फेरि तपाईंले अरुमाथि गरेको गुनासो सुनेर अरुले पनि तपाईंका काममाथि गुनासो गर्न सिक्छन् । तपाईंको ऊर्जा र उपलब्धिलाई अन्तमा गुनासैगुनासोले नास पारिदिन्छ ।
४. भीडको पछि लाग्ने
मूर्ख मानिसले मुर्ख कामहरु गर्र्छन् । कहिलेकाही धेरै मूर्खहरु मिलेर एउतै कुरा गर्र्छन् । यहाँ धेरै मानिसहरु जन् जसले केही न केही गरिरहेकै छन् । धेरै मानिसले गरेका धेरै कामहरु देख्दा तपाईंलाई आफूलाई एक्लो र आफूले गरिरहेको कामलाई अपर्याप्त महसुस हुन थाल्छ । किनभने त्यस्तो बेलामा तपाईंलाई भीडले गरिरहेको काम नगरेर केही न केही गुमाइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ । त्यसबेला दायाँवायाँ नसम्झी एउटै कुरा मात्र सोच्नुस् कि तपाईंले अरु केही नभई मूर्ख व्यवहारको परिणाम मात्र गुमाइरहनुभएको छ ।
तपाईं आफैले आफूलाई देख्न नसकेर मात्र अरुले गरेका कामको परिणामको पछि लाग्नुभएको हुन्छ । आफैलाई राम्ररी नियाल्नुस् र भीडलाई पछ्याउन छाड्नुस् । अरुले बनाएको बाटो अरुहरु नै हिँडून् । आफू हिँड्ने बाटो आफै बनाउनुस् । आफ्नै बाटो हिँड्ने काममा पर्याप्त समय लिनुस् । तपाईंले बनाएको गन्तव्यमा पुग्न लामो यात्रा गर्नै पर्दैन ।
५. आफुले गरेको गल्तीको दोष अरुलाई दिने
यदि तपाईं केही उल्लेखनीय काम गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने तपाईंबाट धेरै गल्तीहरु हुने सम्भावना रहन्छ । आफ्नो काममा लाग्दा तपाईंले कसैको चित्त दुखाउनु हुन्छ होला । निराशाको वातावरण सिर्जना गर्नु हुन्छ होला । भ्रम र अराजकता पैदा गर्नु हुन्छ होला । यी सबै गल्तीहरुको महसुस गर्नुहोस् र यिनलाई सच्याउनका लागि सम्बन्धितहरुसँग माफी माग्नुहोस् ।
माफी मग्नका लागि आफू तल पर्छु कि भनेर कुनै बहाना नखोज्नुहोस् । माफी माग्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको गल्ती गरेको महसुस हुना साथ मन देखि नै ‘मलाई माफ गर्नुस्’ भन्नु नै हो । यसो गर्दा तपाईं आफ्नो गल्तीका कारण उत्पन्न हुने समस्याको समाधान छिटो गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्ना ग्राहकहरुको बिश्वास जित्न सक्नु हुन्छ र आफ्नो वरिपरिका सबैसंग अझै मिलेर काम गर्न सक्नु हुन्छ ।